आँखा हेरेर गुण र क्षमता थाहा पाउन सकिन्छ – Idea Khabar
आइडिया खबर२०७६ फाल्गुन ३, शनिबार ०८:४८
मानिसले कसैलाई भेट्ने वित्तिकै आँखामा हेर्ने गर्दछन् । आँखालाई आत्माको ऐना पनि भन्ने गरिन्छ । आँखाको रंग, दूरी र आकार अनुसार मानिसको गुण र क्षमता पनि फरक हुने गर्दछ । त्यसैले यसबारे यहाँ छोटो जानकारी दिइएको छः
यस खालका आँखा हुने मानिसहरु निकै अनुशासित हुन्छन् । यस्ता मानिसले आफ्ना भावनालाई व्यवस्थापन गर्न सक्दछन् । यस्ता मानिसहरु निकै व्यवहारिक पनि हुन्छन् भने गोप्यता भंग गदैनन् । साथै यी मानिसहरु दयालु तथा संयमित हुन्छन् ।
२. गोला आँखा
गोला आँखा भएका मानिस निकै भावुक हुने गर्दछन् । यस्ता मानिसले आफ्नो कुरा लुकाउदैनन् । गोला आँखा भएमा मानिसहरु सामाजिक, कलात्मक, सबैका प्रिय तथा सिर्जनात्मक हुन्छन् ।
३. नजिक रहेका आँखा
दुवै आँखा नजिक भएका मानिससँग ध्यान केन्द्रित गर्ने उच्च क्षमता हुन्छ । यस्ता मानिसले जे कुरालाई पनि गहिराईमा गएर बुझ्ने प्रयास गर्दछन् । यस खालका मानिस चाँडो रिसाउने गर्दछन् भने सहने शक्ति निकै कम हुन्छ ।
४. टाढा रहेका आँखा
आँखाबीचको दुरी धेरै भएका मानिसहरु जस्तो अवस्थामा पनि घुलमेल गर्न सक्ने, लचकदार तथा सहनशील हुन्छन् । जीवन र जगतप्रति फराकिले सोंच राख्दछन् । यस्ता मानिसले अरुको राम्रो कामलाई प्रशंसा गर्दछन् भने गल्ती गरेमा रचनात्मक सुझाव दिन्छन् ।
५. भित्र गडेका आँखा
आँखा भित्र गडेका मानिसहरुको इच्छाशक्ति उच्च हुन्छ भने उनीहरु होसियार तथा प्रगतिशील हुन्छन् । यस्ता मानिसहरु प्रायः लेखन तथा सिर्जनशील कार्यमा व्यस्त हुन मन पराउँछन् । आफ्नो वरपर घट्ने घटनालाई निकै ध्यान दिएर हेर्ने र सही निष्कर्ष निकाल्ने गर्दछन् ।
६. बाहिर निस्केका आँखा
आँखा बाहिर निस्केका मानिसहरु निकै उर्जावान हुन्छन् । उनीहरु हरेक क्रियाकलापमा सहभागी हुन मन पराउँछन् । तर यस्ता मानिसलाई वेवास्ता गरिदिने हो भने निकै दुःख मान्ने गर्दछन् । आफूलाई वेवास्ता गर्ने मानिसलाई घृणा गर्न शुरु गर्छन् ।
७. चम्किला आँखा
चम्किला आँखा भएमा मानिसहरु निकै मिलनसार हुन्छन् । साथै यस्ता मानिसहरु कमलो मन भएका पनि हुन्छन् । यस्ता मानिसहरु सजिलै खुशी हुन सक्दछन् ।
८. ठूला आँखा
ठूला आँखा हुने मानिस निकै फराकिलो सोंचका हुन्छन् । यस्ता मानिसले ज्ञानको खोजी गर्ने असिमित उत्सुकता हुन्छ । नयाँ नयाँ विचारलाई प्रतिपादन गर्ने हुदाँ यी मानिसहरु पनि सिर्जनशील हुन्छन् । साथै दया, सहानुभूति, वौद्धिकता जस्ता गुण यी मानिसमा पाइन्छ ।
साना आँखा हुने मानिसहरु जे कुरालाई पनि निकै सचेत भएर हेर्ने गर्छन् । हरेक कुरालाई पूर्णरुपमा राम्रो बनाउन खोज्दछन् र काम गर्दा पनि निकै ध्यान दिने गर्छन् । यस्ता मानिसहरु दूरदृष्टि राख्ने, तेज दिमाग भएका र आफूले गर्ने काममा निकै सिपालु हुन्छन् ।
१०. काला आँखा
काला आँखा हुने मानिसलाई इमान्दार मान्ने गरिन्छ । यस्ता मानिसहरु जिम्मेवार पनि हुन्छन् । यी मानिसले आफ्नोबारे अरुलाई भन्दैनन् वा आफ्ना कुरालाई गोप्य राख्दछन् । त्यस्तै यी मानिसहरुमा सक्रियता र तीव्रता निकै हुन्छ ।
११. रातो आँखा
रातो आँखा हुने मानिस निकै रिसाहा हुन्छन् । यस्ता आँखा हुने मानिस सानो कुरालाई लिएर पनि झगडा गर्दछन् ।
१२. खैरा आँखा
खैरा आँखा हुने मानिसहरु निकै धैर्यवान हुन्छन् । उनीहरुको बानी निकै राम्रो हुन्छ भने उनीहरु निकै बफादार पनि हुन्छन् । यस्ता मानिसहरु स्वतन्त्र हुन मन पराउँछन् भने कुनैपनि चुनौतिलाई साहसपूर्वक सामना गर्न तैयार हुन्छन् ।
१३. निला आँखा
निला आँखा हुने मानिसहरु निकै भरपर्दा हुन्छन् । यस्ता मानिसहरु शान्त प्रकृतिका हुन्छन् ।
यी पाँच यौन पोजिसनमा महिलाहरु धेरै आकर्षित हुन्छन्
२०७६ आश्विन ११, शनिबार १५:२८